Uyini umcimbi wesimo sezulu wesiphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ezinsukwini zakamuva yonke indawo yaseCantabrian ibhekene nesinye sezimo zezulu ezidume kakhulu nezenzeka njalo ngaleso sikhathi sonyaka. Noma ngabe igama lakhe lingazwakala kuwe, Kungenzeka ukuthi awazi ukuthi yini le nto eyenzekayo, ngakho-ke ngizokuchazela yona ukuze ucacise konke ukungabaza kwakho.
Isiphepho senzeka lapho kushayisana izindimbane zomoya, esinye sazo somile futhi sifudumele kanti esinye sinomswakama futhi siyabanda. Lokhu kushayisana kuzodala ukwakheka kwemimoya enomoya ovunguzayo ongafika kumakhilomitha ayi-100 ngehora nokwehla kwamazinga okushisa afinyelela kuma-10 degrees uma kuqhathaniswa nesilinganiso sesikhathi. Konke lokhu kuvame ukuhambisana nemvula enamandla kakhulu neziphepho ezibabazekayo ezivame ukudala amagagasi olwandle afinyelela kumamitha ayi-9.
Okuhle kakhulu ngesiphepho ukuthi yinto yesimo sezulu evame ukuthatha imizuzu embalwa, okwenza kube nesimo sezulu esimanzi nemvula, kepha ngaphandle kwenkinga. Njengoba ngikutshelile, ezinsukwini ezimbalwa yonke indawo yaseCantabrian ibikade ibhekene nale nto futhi idale imimoya enezivunguvungu ezingama-90 km / h nemvula engaphezu kwamamilimitha angama-40 ngemitha eyisikwele. Ngonyaka we-1961, kwenzeka enye yezinhlekelele ezibulala kakhulu emlandweni njengoba igcine idale inani elingelikhulu lokufa kwabantu abangama-83 ngenxa yemimoya yamandla esiphepho kanye nemvula enkulu ewele kuyo yonke le ndawo.
Njengamanje, kungenzeka wazi kusengaphambili ukuthi isivunguvungu esidumile singakhiqizwa kanjani futhi ngale ndlela sigweme ukulimala kwempahla nokomuntu siqu. Kungakho yize kuyinto eyingozi ngempela, Ingalawulwa ngaphakathi kwemingcele esunguliwe futhi igweme ukulimala okufana nalokho okwenzeka ngo-1961.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Uyini umcimbi wesimo sezulu wesiphepho
Ukushintsha kwesimo sezulu kwanamuhla kwaqala eminyakeni eyi-180 eyedlule